Zvakanga zviri nyore here kuwana PR PR backlinks muna 2016?
Wati wamboshamisika kuti chii chinonzi backlinks chingaunza kune yako webhusaiti yekukurudzira mushandirapamwe? Nezwi rokuti "kukosha :," Handirevi kubatanidza juice yaunowana pawebsite yako kuburikidza nekunze kwemasangano. Ndiri kutaura pamusoro pekudzoka kunekutsvaga muhuwandu hwebhizimisi rako rekutsvaga mari yepamusoro. Pane mawebsite akawanda anotengesa zvikwereti uye, pashure, kana pane kudiwa kwakanyanya, kune vazhinji vevaya vangada kubhadhara nekuda kwejusi jisi. Regai tikurukure kuti mabasa aya angakanganisa sei kutsvaga injini yekuita basa. Nokutanga ngatitangei kutarisisa zvakatengesa kushambadzira nekutengesa indasitiri.
Link kutenga uye kutengesa
Chero bedzi Google yakagamuchira backlinks sechinhu chakakosha, backlinks ichave yakakosha zvikuru pakati pevadzidzisi vewebhu uye webmasters.
Chibvumirano chekutenga chikwata chakaitika pakati pe2000, zvichichinja shanduro yose nokusingaperi. Munguva iyoyo iyo mhizha yose yakanga yakura kuzotengesa backlinks. Mamwe mawebhu anoburitswa anowanikwa kumashure ekuchengetwa kwekugara. Mutengo we rimwe Renault link wakatanga kubva pa $ 30 pamwedzi. Izvi zvinoshandiswa zvakashanda sezvikwata zvemashure.
Mushure mechinguva, Google, pamwe nedzimwe tsvakurudzo dzekutsvaga, dzakatanga kutora masayiti avo vainge vachitengesa mutengesi kuburikidza nemashizha emadhorocha kana maforamu. Izvi zvikwereti zvakakonzera kuderedzwa kwewebsite rankings kana de-indexation.
Zvisinei, kunyange zvikwereti zvakanyanya zveGoogle hazvina kurega backlink kutengesa kushandiswa kwemabhizimisi. Izvo zvikonzero nei kutenga uye kutengesa backlinks kwakawana nzira itsva dzekuita kuti zvive zvakaoma kutsvaga injini kuona mabasa avo.
Maererano nemitemo yeGoogle, kutenga kana kutengesa backlinks dzinopfuura neGoogleRank dzichigamuchira semitemo yakakomba mitemo. Kana iwe wave uchiwanikwa pakutengesa mazano ekuvandudza nzvimbo dzekutsvaga, nzvimbo yako inowanzopiwa chirango kubva kuGoogle. Ndicho chikonzero, kana wakaita mabasa aya, unofanirwa kuzviona njodzi.
Kutenga uye kutengesa backlinks muna 2016
kuripa zvakabhadhara pamapeji avo, iwe unongoda kuisa "kutenga mushanyi post" mubvunzo muGoogle search box. Zvimwe zvezvibasa izvi zvichakupa nebasa rekuvaka rekubatanidza pamwe nekubhadhara zvakakodzera. Zvisinei, kunewo akawanda ema-web-webhupu akakurumbira anotengesa mitengo. Pane mamwe mazano ekunyorwa kwepamusoro pamusana wevashanyi pamusana wekudzokera kumashure. Munyaya iyi, mapato anobvumirana kushandira pamwe chete pasina.
Kutenga zvigadzirwa kubva kuvablogi
Zvakawanda zvekudzokera shure muna 2016 zvakasimbiswa nekutengeserana kwepachivande kubva kune ma blogger. Izvi zvinoramba zvisingaonekwi nemitsva yekutsvaga uye hazviwanzokonzera matambudziko ose. Vazhinji mablogiki vanoziva kukosha kwemashure ekudzokera shure uye vanoda kubhadhara kune imwe nheyo yavanoisa. Zvakare, zvakakosha kutaura kuti vamwe vanofarira mablogi vanobvumirana kuisa nyaya nehutano kwemazuva maviri kana maviri. Nhamba huru yemabloggi inotengesa backlink inowanikwa mumusika unotevera niches - mafashoni, zvivako, mafambiro, kufamba, mari, dzidzo, mutambo. Ivhareji yemari yekutenga high PR backlinks muna 2016 yaiva $ 300 pakati-yakanakisa webhu inowanikwa, uye inodarika $ 3000 pamatunhu akakurumbira akakurumbira Source .